Akaiswa mukati ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 29 May 2019	• 3 Comments
Dhiyabhorosi takaparidzira mifananidzo yevhidhiyo pamusoro pemhosva yeAlin Faber, umo "baba vaAnne" vakataura. Kutaura zvazviri, yakanga iri gakava umo tsitsi dzaiwaniswa nekuda kwekubviswa kwemashoko akawanda sezvinobvira kune mhondi inotyisa seMichael P. "Baba vaAnne" vakatsamwa zvokuti [...]
Michael P. Anne Faber psyop 'Dambudziko Reaction Solution' kune mamwe mapurisa enyika uye kodzero shomanana
Akaiswa mukati ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 28 March 2019	• 18 Comments
Mune zvinyorwa zvengirozi ndakarondedzera kuti nei Anne Faber mhosva, umo Michael P. akanga ari mutambudzi, ainyanya kunge ari PsyOp (kushanda kwepfungwa). Mushandirapamwe wokudhonza nemimwe mitemo. Nhasi kuti monkey inonzwisisika ichibuda kunze. Uchapupu hwehuwandu Chinetso, Kuita, Solution mu optima forma. Iwe unogadzira [...]
Mhinduro Anne Faber mhosva sezvakafanotaurwa zvakare neHIVS pasina tsvakurudzo yepfungwa
Akaiswa mukati ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 4 July 2018	• 2 Comments
Kunyange zvazvo vanhu vakawanda havana kuda zvinhu makuru akaita Anne Faber uye Michael P. zvichida Aizokwanisa kunge mupfungwa kushanda (PSYOP) - kusunda kuburikidza matanho matsva - anoita akafanotaura chinangwa ichi zvakafamba anenge pakarepo mushure mechiitiko ichocho kuti chionekwe. Ini [...]
Ndeipi Michael P. uye bhizinesi reAnf Faber vane chokuita neNdebe yeNyika? Ita 1 mamiriyoni!
Akaiswa mukati ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 15 June 2018	• 6 Comments
Kana iwe uchida kubvumira chimwe chinhu chakakosha kuchinja chinopinda zvisiri izvo, nguva dzose zvakanaka kuti uite izvozvo kwechiitiko chikuru. Vanhu vatove vakabatikana nechiitiko ichocho uye vachiri kutarisa zvinenge zvichipfuura, asi kukanganisa kwekufunga kwakakwana iko kakakwana zvakakwana kana zvishoma kupera. Iwe zvino unovakabata iwo mhedziso [...]
Nzira yepamutemo isinganzwisisiki: DNA uchapupu, nhoroondo yekuongorora uye yeropopsy pamusoro peAnn Faber naMichael P. vasingaratidzi mutongo
Akaiswa mukati ANNE FABER	by Martin Vrijland	pana 12 June 2018	• 15 Comments
Wati wambosangana nemhosva here, iyo inonzi munhu anopomerwa ari oga uye anongoruramiswa chete pamusana pekureurura? Zvechokwadi isu tose tinoda kutenda kuti Michael P. mutoro unotyisa uye mhondi uye kuti uyo anonzwisisa Anne Faber akaenda bhasikoro risina mhosva paanenge manheru apo zvakajeka mamiriro ekunze [...]
Sei Anne Faber akatsika pamusoro pechikoro chaMichael P. muchikepe cheSoesterberg?
Akaiswa mukati ANNE FABER	by Martin Vrijland	pana 12 June 2018	• 24 Comments
Mushumo wekuteerera pamusoro pemhosva yekubatwa nekuponda kwaAnn Faber inoratidza zvakajeka kuti Michael P. (Panhuis) angadai akamanikidza Anne kugara pachikoro chake. (Verenga shanduko iyi / kugadziriswa munyaya yenyaya). Pano angadai akaisa ngowani yake uye maoko ake ne tiewrap pamwe [...]
Zvimwe zviitiko zvinokosha mumatare (monster) Michael P. akapoteredza chikamu che Anne Anne
Akaiswa mukati ANNE FABER	by Martin Vrijland	pana 11 June 2018	• 16 Comments
Zvakaoma kusave zvakananga pamhosva uye saka ndine chokuita nemashoko epaIndaneti kubva kuSaskia Belleman van de Telegraaf. Zvichipa kuti ndinogara kune imwe nyika uye handigoni kutakura zvinodhura zvekufamba, iyo ndiyo nzira chete. Asi [...]
Anne Faber mberi peji Telegraaf, kupi shamwari Shamwari Nathan uye ndiani anonzi shamwari?
Akaiswa mukati ANNE FABER	by Martin Vrijland	pana 2 June 2018	• 17 Comments
Icho chaiva chiitiko chinoshamisa kwazvo pamusoro paAnn Faber uyo aiita sokuti ari kusunungura nhasi, achirwisa pachena pfungwa yokuti chinhu chose chinogona kunge chakavakirwa pa psyop. Asi ani naani anoverenga nyaya kubva kuTelgraaf yakadhindwa yezuva ranhasi, achaona zvinhu zvishomanana. Hapana zvakataurwa nezve [...]
Anne Faber akatanga kuvharwa, ndokubva apiswa, zvino pakarepo yakavigwa. Mhosva yebaba Wim Faber?
Akaiswa mukati ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 27 May 2018	• 9 Comments
Tinogona kuzviisa pamusana wemashoko, asi mumamiriro ezvinhu akadai saAlfred Faber, zvinoratidzika kwandiri kuti haugoni kuvhiringidza mariro nekupisa. Iye zvino tinogona kutaura kuti Telegraaf inoita zvikanganiso kakawanda, asi mumunhu akashayikwa sa Anne Faber Ndinofunga kuti yakakwana [...]
Michael P. akazivisa zvakanyanya kuponda kwaAnn Faber: nhau dzenhema kana chokwadi?
Akaiswa mukati ANNE FABER	by Martin Vrijland	musi wa 11 January 2018	• 24 Comments
Nhasi nhepfenyuro yakashuma kuti Michael P. (iye zvino vose vanoziva kuti P inomiririra Panhuis) yaizozivisa zvikuru kuponda kwaAnn Faber. Izvozvo zvingangoerekana zvabuda panguva yep proma. Kuti izvi hazvina kubudiswa mberi, hazvina kukodzera mumutsara wekusununguka kuti [...]
Total Visits: 1.449.762
Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: imwe nehafu yemamita uye kuisirwa kwemapurogiramu
Future op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
Camera 2 op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
Lydia Roosje op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
ongorora op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps